NY birao biriko birao FIDULINK ahoana ny fomba fiasany?
WWW.FIDULINK.COM > INDRINDRA IZAO? NY BAIBOLY DIA FIDULINK VIRTUAL OFFICE SOFTWARE
NY FAHASALAMANA AKANARISO
100% fitantanana sy fitantanana an-tserasera
MY OFFICE dia vavahadin'ny fitantanana ary fifandraisana mivantana eo amin'ireo mpandraharaha sy mpikambana ao amin'ny FIDULINK. MY OFFICE dia fitaovana mahery vaika izay mamela ny mpanjifa FIDULINK hanana fahafaham-po amin'ny fitantanana ny orinasan'izy ireo fa koa ny fitantanana ny Birao, birao virtoaly, fitantanana kaonty, fomba fitantanan-draharaha ary serivisy maro hafa amin'ny Internet izay tsy misy raha tsy amin'ny FIDULINK.com
Fidirana malalaka amin'ny mpanjifa rehetra FIDULINK manana orinasa na birao farafaharatsiny nanofa trano iray amin'ireo ivon-toeran'ilay vondrona FIDULINK.
Ny fidirana am-pahamehana eo amin'ny lampihazo MY OFFICE miaraka amin'ny tenimiafin'ny mpampiasa sy ny adiresy mailaka. Ny sehatra dia manana fiarovana amin'ny alàlan'ny fanamarinana 256 Bits SSL.
Sehatra azo idirana na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao avy amin'ny finday avo lenta, solosainao na takelaka misy anao aza.
Mamorona manokana ny sehatra ho an'ny mpandraharaha MY OFFICE dia manana ny fitaovana fitantanana sy fanaraha-maso rehetra hatramin'izao. Ny fanavaozana ny tena fotoana dia manome anao anao mivantana amin'ny tompon'andraikitra anao fa ny kaonty anao ary na ny mpitan-tsoratra anao na ny mpiasanao.